ငွေလဲနှုန်း MMK သို့ EUR, မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ယူရို, ပွောငျး
ငွေလဲနှုန်း MMK — EUR ပွောငျး မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ယူရို, ဂဏန်းတွက်စက်, ဘယ်လောက်အလိုတော်
0,00 EUR ယူရို
ဒီငွေလဲနှုန်း MMK/EUR ရက်စွဲအပေါ်သက်ဆိုင်ရာ 25.10.2020 01:54
သင့်အနေဖြင့်ငွေကြေးကူးပြောင်းခြင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်များမှာ မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ (MMK) и ယူရို (EUR). အဆိုပါလဲလှယ်မှုနှုန်းကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါသည် 25.10.2020 01:54.
ယူရို (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ code ကို EUR) — : ဒေသခံငွေကြေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပါသည် သြစတြီးယား, Aland ကျွန်းစု, အင်ဒိုရာ, ဘယ်လ်ဂျီယမ်, ဗာတီကန်, Guadeloupe, ဂျာမနီနိုင်ငံ, ဂရိနိုင်ငံ, ဥရောပသမဂ္ဂ, အိုင်ယာလန်, စပိန်, အီတလီနိုင်ငံ, ဆိုက်ပရပ်စ်, လတ်ဗီးယား, လစ်သူ, လူဇင်ဘတ်, Mayotte, မော်လ်တာ, မာတီ, မိုနာကို, နယ်သာလန်, ပေါ်တူဂီ, ပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်း, ဆန်မာရီနို, စိန့်မာတင်-, စိန့် Pierre နှင့် Miquelon, လိုဗက်ကီးယား, ဆလိုဗေးနီး, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, မွန်တီနီဂရိုး, စတိုးနီးယား.
1 1 526,87
57634,35
10 15 268,71
50 76 343,54
100 152 687,07
200 305 374,15
500 763 435,37
1000 1 526 870,74
20003053 741,49
50007634 353,72
10000 15 268 707,44
20000 30 537 414,88
50000 76 343 537,19
ငွေကြေးက ISO code ကို EUR
စိန့် Pierre နှင့် Miquelon
အနု eurocent (1/100)
ဒင်္ဂါးပြား 1, 2, 5, 10, 20, 50 ဆင့်, 1,2EUR
ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတွေ 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR
ACS အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. Page load 0.0347 s.